Nhau - Iyo RMB yakayemurwa neanopfuura masere masere pamadhora ekuAmerica muhafu yegore, uye mabhizimusi ekunze anotora matanho mazhinji ekudzivirira njodzi dzekunze kwekunze.
Kubva padanho repasi pakupera kwaMay kusvika ikozvino, iyo RMB yekutsinhana mwero yakadzoserwa nzira yese uye munguva pfupi yapfuura yakasvika kutenderera 6.5, ichipinda mu "6.5 eras". dhora munaNovember 30, data kubva kuChina Kunze Kunze Kwekutengeserana Sisitimu yakaratidza. Kubva pane iyo Chivabvu 27 ya7.1775, iyo yuan yakaonga 8.3% kusvika parizvino.
Nezve iko kuita kwakasimba kweRMB, Bhizinesi reChina Research Institute vatsvagiri vanofunga kuti zvikonzero zvikuru zviri zviviri: chekutanga, kusaina kweRCEP kwakaunza nhau dzakanaka, kubatana kweAsia-Pacific kwenharaunda kunoenderera mberi, izvo zvinobatsira kusimudzira kukura kweChina kutengesa kunze kwenyika uye kugadzirisa hupfumi; Kune rimwe divi, kuenderera kushaya simba kwedhora reUS, richidonha zvakare kutenderera 92.2. Svondo rapfuura, iko kudzikira kwakasvika pa0.8%, izvo zvakasimudzira kukoshesa kwekushandura kweRMB mwero wekutsinhana.
Nekudaro, kune vekunze mabhizinesi emakambani, kukoshesa kweRMB mumwe munhu anofara mumwe munhu kunetseka. Kana mari yekumba ikatenda, mukana wemutengo wezvinhu zvekutengesa kunze unozodzikiswa, uye zvinhu zvinounzwa kunze zvichange zvakachipa. Naizvozvo, zvinobatsira kupinza mabhizinesi, asi zvinokonzeresa kupinza kunze kwenyika uye kugadzirisa zvekare mabhizinesi ane mashoma, nepo kukanganisa kune mabhizimusi ekunze kuri kukuru. Kune emabhizimusi ekutengeserana ekunze, pamusoro pevashandi vezvemari vanofanirwa kuita mutongo wekutarisa-tarisa maitiro eiyo mwero wekuchinjana, zvakare zvakakosha kuti usarudze maturusi ekuvharira njodzi dzemitengo yekutsinhana senge sarudzo uye kumberi.